24 / 02 / 2017 04 / 05 / 2017 နစ်ခ် 1428 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Batman Movie,, စာအုပ်, စုဆောင်း Minifigures, DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, Scottish Batman, အဆိုပါ Lego Batman Movie,, TLBMvignetteseries
Tartan Batman အဆိုပါမှသီးသန့်ဖြစ်ပါတယ် Lego Batman ရုပ်ရှင်: Gotham ရှိ Chaos City စာအုပ် လက်ရှိအမေဇုံမှပဲ£ 3.49.
The ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းအရာတစုံတခုရှိပါက Lego Batman ရုပ်ရှင်အသေးစားများ၊ ဒီဇိုင်နာများသည်ဤစီမံကိန်းကိုလုပ်ကိုင်ရာ၌ပျော်စရာများစွာရှိသည်။ ထူးခြားသောလူကြမ်းဒီဇိုင်းများမှသည် Hilary အထိဖြစ်သည် Batman ဝတ်စုံများ၊ ဤသေးငယ်သောရုပ်ပုံကားချပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ကိုတကယ်ပျော်စရာကောင်းသည့်ဗင်နီဇွဲလားများပေါ်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Hammertime ဖြစ်သည်!
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: Twisted Firestarter →